ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
11 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 227 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 235 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ကလင် Barton, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel ဖုတ်ကောင်, ပိုစတာ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 347 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
31 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 291 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, Marvel စတူဒီယို, MCU, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
27 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 376 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ဖုတ်ကောင်, MCU, ရောဘတ် Kirkman, Sean Phillips က, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? ၇၁၀၃၁ ဖြင့် LEGO ခြံထဲသို့ undead အားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာသည် Marvel စတူဒီယို၊ startZombie Captain America နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ မှာ
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 404 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 600 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
11 / 08 / 2021 11 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 219 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
06 / 08 / 2021 06 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 335 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဓါးရွက်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Marvel, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်